Sheekh Abuu Muscab oo faafahiyay howlgalladii ay fuliyeen Saacadihii lasoo dhaafay.(Dhagayso) – Shabakadda Amiirnuur
May 16, 2019 9:28 am by admin Views: 159
Afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Cabdul-caziiz Abuu Muscab ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay wuxuu faafaahin ka bixiyay howlgalladii ciidamada mujaahidiinta ay fuliyeen 72-dii saac ee lasoo dhaafay.
Howlgallada oo uu Afhayeenku sida gaarka ah u xusay waxaa kamid ah camaliyadii Nafhurnimada ahayd ee ka dhacday xarunta maamulka degmada Wardhiigley, taas oo uu sheegay in xubno badan oo muhiim ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.
Dadka ku dhintay camaliyadaas waxaa ku jira sida uu Abuu Muscab sheegay, rag dhar cad ah oo la shaqeynayay sirdoonka dowladda federaalka, wuxuuna farriin uu u diray ugu sheegay iney Mujaahidiintu ka war hayaan, mudankoodana la marin doono.
Sidoo kale Sheekh Abuu Muscab wuxuu ka hadlay dagaallo iyo howlgallo ka dhacay wilaayaadka Jubbooyinka, Shabeellaha hoose iyo Baay iyo bakool, iyo sidoo kale qaraxyo iyo dilal ka dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda.
Howlgalladan dhacay ee uu faafahiyay Sheekh Abuu Muscab, Afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay si isku mid ah u beegsadeen ciidamada Shisheeyaha, iyo kuwa dowladda federaalka.
Sheekh Abuu Muscab, wuxuu dhinac kale soo hadal qaaday howlgalkii ka dhacay Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay taliyihi ciidamada isku dhafka maamullada Puntland iyo Galmudug, wuxuuna sheegay in ninkaas uu ahaa dadkii usoo gurmaday ninkii Nabinimada sheegtay ee ay mujaahidiintu Gaalkacyo ku dileen.